मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2020-04 > भगवानको उपस्थिति को ठाउँ
जब इस्राएलीहरू मरूभूमि भएर पसे, तिनीहरूको जीवनको केन्द्र बासस्थान थियो। यस विशाल तम्बू, दिशानिर्देशहरू अनुसार भेला गरिएको थियो, सबैभन्दा पवित्र, पृथ्वीमा परमेश्वरको उपस्थितिको भित्री स्थान थियो। यहाँ सामर्थ्य र पवित्रता सबैले प्रस्टै देखेका थिए जसको उपस्थिति यति बलियो थियो कि प्रायश्चितको दिनमा प्रधान पुजारीलाई मात्र एक पटक भित्र जान दिइन्थ्यो।
Das Wort «Tabernakel» ist eine Neuprägung für die Stiftshütte (das Offenbarungszelt), die in der lateinischen Bibel «Tabernaculum Testimonii» (Zelt der göttlichen Offenbarung) benannt wird. In der hebräischen Sprache ist es als Mischkan «Wohnung», im Sinne von Gottes Heimstätte auf Erden, bekannt.
साथै, एक इस्राएलीको आँखाको कुनामा पवित्र पाल थियो। यो एक निरन्तर सम्झौटो हो कि परमेश्वर आफैले आफ्ना प्रिय बच्चाहरू संग उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। शताब्दीयौंसम्म बासस्थान यरूशलेमको मन्दिरले प्रतिस्थापन नगरेसम्म मानिसहरू माझ थियो। येशू पृथ्वीमा आउनु अघि नै यो पवित्र ठाउँ थियो।
Der Prolog zum Buch Johannes sagt uns: «Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit» (Johannes 1,14). Im Urtext steht für das Wort «wohnte» den Begriff «zeltete». Der Text könnte so wiedergegeben werden: «Jesus wurde als Mensch geboren und zeltete unter uns».
त्यसबेला जब येशू हाम्रो संसारमा मानिस भएर आउनुभयो, उहाँको उपस्थिति येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा रहेको थियो। अचानक परमेश्वर हाम्रो बीचमा बस्नुहुन्छ र हाम्रो छरछिमेकमा सर्नुभयो। पुरानो दिनको विस्तृत अनुष्ठानहरू, जसमा परमेश्वरको उपस्थिति हुनको लागि मानिसहरू धार्मिक रीतिपूर्वक शुद्ध हुनुपर्थ्यो, अब विगतको कुरा भयो। मन्दिरको पर्दा फाडिएको छ र परमेश्वरको पवित्रता हामी बीचमा छ र मन्दिरको पवित्रस्थानमा टाढा छैन।
त्यो आज हाम्रोलागि के हो? यसको अर्थ के हो भने हामीले परमेश्वरसँग भेट गर्न भवनमा जानु पर्दैन, तर उहाँ हामीसँग बाहिर आउनुभयो भनेर के भन्न खोजेको हो? येशूले त्यो पहिलो कदम हाम्रो तर्फ लिनुभयो र अब शाब्दिक इमानुएल - परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ।
परमेश्वरका जनहरू भएको नाताले हामी घर र निर्वासनमा छौं। हामी मरूभूमिमा इस्राएलीहरूजस्तै हिंड्छौं, जब हामी यो कुरा जान्न सक्दछौं भने, साँचो महिमा स्वर्गमा छ, परमेश्वरको महिमामा। र अझै परमेश्वर हामी माझ बास गर्नुहुन्छ।
अहिले हाम्रो स्थान र घर पृथ्वीमा छ। येशू एक धर्म, चर्च, वा ईश्वरतान्त्रिक निर्माण भन्दा बढी छ। येशू प्रभु र परमेश्वरको राज्यको राजा हुनुहुन्छ। येशू हामीमा नयाँ घर फेला पार्न आफ्नो घर छोडनुभयो। यो अवतारको उपहार हो। परमेश्वर हामीमध्ये एक हुनुभयो। सृष्टिकर्ता आफ्नो सृष्टिको अंश बन्नुभयो, उहाँ आज हामीमा हुनुहुन्छ र सदाको लागि।
आज परमेश्वर बासस्थानमा बस्नुहुन्न। येशू विश्वासको साथ जससँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ, येशू तपाईको जीवन तपाईमा बस्नुहुन्छ। तपाईंले येशू मार्फत नयाँ, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त गर्नुभयो। ती पालहरू, बासस्थान, बासस्थान, वा मन्दिर हो जहाँ परमेश्वर तपाईंको आशा, शान्ति, आनन्द र प्रेमले तपाईं मार्फत तपाईंको उपस्थिति भर्नुहुन्छ।